China PLC inodzorwa yakatwasuka girazi sandblasting muchina nyore mashandiro fekitori uye vagadziri | Zhengxing Mechan
PLC inodzorwa yakatwasuka girazi sandblasting muchina mashandiro ari nyore
Muchina unodzorwa nePLC, inokodzera kugadzirisa 5-30mm ukobvu hwegirazi rakatsetseka uye steric pateni. Girazi rinofambiswa nemabhanhire, kana girazi rasvika panzvimbo yejecha, pfuti dzinotyairwa nebhandi dzinoenda kumusoro-uye-pasi dzosvipa jecha. Kureba uye hupamhi hwe sandblasting zvinogona kugadziriswa zvinoenderana nezvinodiwa. Zvakanakira mabhanhire kugadzikana kutapurirana, kugona kwakanyanya uye nyore kugadzirisa. Dhiraivhu dhizaini yeiyo sandblasting pfuti iri kunze kwemuchina iyo inoita kubatsirwa kune yakareba nguva yakajairika kushanda nekuchengetedza kwemazuva ese. Iyo muchina inotora iyo PLC yekutonga, iyo inounza nyore kushanda uye kuongorora iyo girazi chinzvimbo otomatiki kana sandblasting.
Nyore oparesheni inowanikwa
jecha kuputika pfuti
Muchina unodzorwa nePLC, inokodzera kugadzirisa 5-30mm ukobvu hwegirazi rakatsetseka uye steric pateni. Girazi rinofambiswa nemabhanhire, kana girazi rasvika panzvimbo yejecha, pfuti dzinotyairwa nebhandi dzinoenda kumusoro-uye-pasi dzosvipa jecha. Kureba uye hupamhi hwe sandblasting zvinogona kugadziriswa zvinoenderana nezvinodiwa.
Zvakanakira mabhanhire kugadzikana kutapurirana, kugona kwakanyanya uye nyore kugadzirisa. Dhiraivhu dhizaini yeiyo sandblasting pfuti iri kunze kwemuchina iyo inoita kubatsirwa kune yakareba nguva yakajairika kushanda nekuchengetedza kwemazuva ese. Iyo muchina inotora iyo PLC yekutonga, iyo inounza nyore kushanda uye kuongorora iyo girazi chinzvimbo otomatiki kana sandblasting.
1600 mm kukwirira (ZXSD16)
2000 mm kukwirira (ZXSD20)
2500 mm kukwirira (ZXSD25)
Kureba kwekugadziriswa girazi
12-15m² / h (kana uchishandisa Green carborundum)
0.6 ～ 0.8Mpa (5m³ / Maminitsi)
Pashure: 6 motors kutenderera kumucheto OG kumucheto inonyanya kufarirwa girazi muchina
Zvadaro: otomatiki epanyama centrifugal kurapwa kwemvura dehydrator
Otomatiki Girazi rekugadzira Sandblasting
Nyore Unoshanda Sandblasting Machine
Girazi Sandblasting Machine Vhidhiyo
Vertical Girazi Sandblasting Machine